Madaxweynaha oo ku laabtay Xamar. - Caasimada Online
Home Warar Madaxweynaha oo ku laabtay Xamar.
Madaxweynaha oo ku laabtay Xamar.
Goordhow Waxaa garoonka Aadan Cadde kasoo dagay madaxwaynaha Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo.
Wafdiga uu madaxweynha Soomaaliya horkacaayay ayaa waxaa kamid ahaa Ra’iisal wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ahna wasiirka arrimaha dibedda Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadan, wasiirka gaashandhiga Cabdi Xakiin Maxamuud Fiqi iyo mas’uuliyiin kale oo ka tirsan Dowlada Soomaaliya.
Garoonka diyaaradaha ee Magaalada Muqdisho ku soodhaweeyay Madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdigiisa afhayeenka Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari iyo Ra’iisal wasaaraha xukuumadda Cabdi Faaarx Shirdoon Saacid.
Madaxwaynaha iyo Wafdigiisa ayaa waxaa loo galbiyay Aqalka Madaxtooyada ee Vila Soomaaliya waxaana uu baajiyay manta safar uu ku tagi lahaaKenya.
Madaxwaynaha ayaa todobaadkan waxaa uu ku maqnaa dalalka dariska ah ee Jabuuti iyo Itoobiya kuwaas uu kala hadlay in wax lawada qabsado.